We Fight We Win. -- " More than Media ": ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ပြည်သူတွေက ပြောချင်တဲ့ စကားများ
ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ပြည်သူတွေက ပြောချင်တဲ့ စကားများ
ဒေါ်စု နဲ့ အမတ် တွေကို ခင်ဗျား ကိုယ်စား ပါလီမန်မှာ ဘာတွေပြောစေချင်သလဲ ။
Kaung Myat Min ကချင်ပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေရပ်စေချင်တယ်...ထောင်ထဲမှာ ကျန်တဲ့လူတွေအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးစေချင်တယ်.
Phoe Lone ၂၄ နာရီ မီး လင်းချင်တယ်......
Maung Luu Nge မသန်စွမ်းသူများအရေးအတွက် အရေးဆိုပေးစေလိုပါတယ်
Soe Linn How about the Majority MPs already occupied in the Parliament? They have NO Resposibilities to DO for the People of BURMA, haven't they?
Aung Pan လွှတ်တော်ပထမအကြိမ် တတိယပုံမှန် အစည်းအဝေးများသည်ယနေ့နောက်ဆုံးဖြစ်ပြီး မေ နှင့် ဇွန်လတွင် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ ရပ်နားထားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ်များဇူလိုင်လ မှသာ လွှတ်တော်တက်နိုင်တော့မည်ဖြစ် ကြောင်း
Kay Thi Khaing လုပ်စရာတွေနဲ့ အရေးကြီးတာတွေကတော့အများကြီးပါပဲ...လောလောဆယ်ဦးစားပေးအနေနဲ့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဖယ်ရှားရေးနဲ့ စီးပွားရေးဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စေချင်တာပါပဲ.....
Nankhan Yone Institutions နဲ့ Public Policy တွေကို Consistency ရှိရှိနဲ့ အောက်ခြေလူတန်းစားတွေနဲ့ လူတိုင်းလက်လမ်းမီအောင် လုပ်ပေးစေချင်တယ်။
Khin Zai ပြည်သူတွေရဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေနေတာကိုလက်တွေ့ ကျကျအကျိူးသက်ရောက်မူ့ ရှိအောင်လုပ်ပေးနိင်မှပြည်သူဘဏ္ဍာ..စားရေရိက္ခါကိုခံစားပါးး..။
Rajiv Chowdhury ကုိုမုိုးသီးကုို ပြန်ခေါ်ပါလုို
Tin Maung Win ‎1. cease fire at Kachin state and in the whole countries. 2. Rule of law be implemaneted(no one be above the law) to all level of government organiztion. 3. No crony economy. 4. Open and transparent economic system.4. Defence budget be less thab 8% of whole budget, reduce quantity of army.
Ko Thar Htet Htet Stop the war ,Free All political prisoners
တတ်ချင်မှ တတ်ရအောင် လွတ်တော်က ခင်များ အမေလင်အိမ် မဟုတ်ဘူး...။http://www.mgkyautkhae.com/2012/05/blog-post_3777.html
ရိုဟင်ဂျာအရေးကို ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်ဆွေးနွေးစေချင်တယ်။ ဒီဘင်္ဂါလီ မူဆလင်တွေကို မြန်မာတိုင်းရင်းသားသူမျိုးစု တစ်ခုအဖြစ်လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါ။
မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီဖေါ်ဆောင်ရေးမှာ နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အရေးဟာအင်မတန်မှအရေးပါပါတယ်။နိူင်ငံရေး
ပြည်သူတွေ အကြောက်တရားမှ ကင်းဝေးကြစေအောင်
Ko Sit Moan said...
I just want to remind all of you to look back the history of India, especially for their attempts to get independence from Britain.Gandhi's way alone haven't worked . It was supported by armed revolutionary groups.When the two ways worked at the same time the former British government finally gave up.I don't want you to walk on one way.
KNU နဲ့အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလက်မှတ်ထိုးပြီးပြီဗျာ နအဖ စစ်တပ်တွင်KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာချွင်းချက်မရှိမြန်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆိုပေးပါဗျာ။
မိုးသီး blog ပေါ်မှာ copy လုပ်တုန်း link လုပ်တုန်းပဲလား။
လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့် ၇၇ှိေ၇း